Suuqyadda Caasimadda oo lagu iibinayo daawooyinka dhacay | KEYDMEDIA ONLINE
Suuqyadda Caasimadda oo lagu iibinayo daawooyinka dhacay
Waxaa weli Guud ahaan suuqyada dawooyinka dhulka soomalida lagu iibiyaa dawooyin dhacay, oo ragg manaxyaal ah ay ka macaashaan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa Caasimadda iyo gobollada dalka kusoo badanaya bilihii lasoo dhaafay daawooyinka dhacay oo lagu iibinayo suuqyadda.
Dawooyinkan dhacay ayaa waxaa dalka keena ganacsato soddonkii sanno ee ugu danbeysay ka macaashayey waayaha adag ee ay shacabku wajahayaan, waana kuwa badankooda heerkoodu dhaqaalaha yahay dabaqada sare.
Goobaha Farma-shiyayaasha oo aad u badan ayaa sidoo kale qeyb ka ah faafinta dawooyinkan dhacay, waxana si joogta ah ay uga iibiyaan dadka dawooyinka usoo raadsada.
Khatar badan ayaa ku gadaaman dawooyinka dhacay, waxana jirta in ganacsatada dalka keenta ay ka soo dhoofsadaan dalal ku yaala qaarada Afrika iyo Asia, siiba wadamada, Masar, Hindiya, Malysia, Sacuudiga, iyo Shiinaha.
Dowladdihii dalka soo maray, ayaanan diyaarin xeer rasmi ah oo joojiya dawooyinka dhacay isla markaana koontaroola kuwa dalka la soo galinayo, iyagoo keliya eegta canshuurta kooban ee uu qofka soo dagsanayo bixiyo.
Gudaha Soomaaliya, dhowr jeer ayey dhacday in meel fagaaro ah lagu gubo dawooyin dhacay oo dadka rayidka laga iibinayey, waxaase jirin cid arrintaasi xabsi u mudatay.
Dawooyinka dhacay ama duqoobay ee yaala gudaha dalka ama lagu tuuro jidadka, ayey sidoo kale bahda caafimaadku sheegayaan in la dhaxlo, caafimaad darro dhanka bey'ada ah, maadaama ay yihiin haraa waxyeelo badal leh.
Si kastaba shacabka ayaa ah kuwa dhibaatada ugu badan ka qaada dawooyinkan dhacay, waxana sanadkii tagay uu ahaa midkii ay bulshada ugu isticmaal badnayd dawooyinkan dhacay, sababo la xiriira COVID19 oo dunida kala xanibay, halka arrinta la yaabka leh ay tahay in muuqaal ahaan ragga dalka keena dawooyinkaas ay yihiin kuwa diini ka muuqata, iyadoo ay xusid mudan tahay in bahd caafimaadka ay ka gaabiyeen ka hadalka dawooyinkan dhacay.